မန္တလေးဂီဇက်(မိသားစု) မဟာသင်္ကြန်ရေကစားမဏ္ဍပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » မန္တလေးဂီဇက်(မိသားစု) မဟာသင်္ကြန်ရေကစားမဏ္ဍပ်
Posted by Khaing Khaing on Feb 22, 2012 in Celebrity, Entertainment | 55 comments
ရွာသူ ရွာသားအပေါင်းတို့ ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ “မန္တလေးဂီဇက် မဟာသင်္ကြန်မဏ္ဍပ်” ကို ဆောက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်…. မဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်ရmမှာ မဏ္ဍပ်အတွက် စရိတ်စကတွေအများကြီးကုန်ကျဖို့ရှိပါတယ် …ဒါကိုလည်း ရွာသူရွာသားများက အားလုံးတာဝန်ယူပေးစေချင်ပါတယ်….. ပထမ မဏ္ဍပ်နေရာကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရဖို့အတွက် စည်ပင်ခွင့်ပြုချက် ဘယ်မြို့မှာ မဏ္ဍပ်ဆောက်ရင်ကောင်းမလဲ မဏ္ဍပ်ဆောက်လုပ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ် မဏ္ဍပ်အပြင်အဆင်အတွက်(sponer) ပြီးတော့ စတိတ်ရှိုး မြန်မာယိမ်းအကများ အကျွေးအမွေး စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရန်…အစရှိတာတွေအများကြီးရှိပါတယ် ဘယ်သူတွေဘယ်တာဝန်တွေယူနိုင်ပါမလဲ ပြီးတော့ မဏ္ဍပ်မှာ ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေထပ်ဖြည့်ရင် စည်းကားပြီး စည်းကမ်းရှိသွားမလဲ ဒါလေးတွေကိုအကြံဥာဏ်လိုချင်ပါတယ်…..
မဏ္ဍပ်က ရွာထဲမှာပဲဆောက်လုပ်သွားမှာပါ…….အနှီ မဏ္ဍပ်မှာ ရွာသူ/ရွာသားတွေပဲ ရေကစားကြသူတွေ ၊ ရေပက်ခံကြသူတွေ၊ ယိမ်းသမ၊ စသဖြင့်ပေါ့နော်……….ဒီရွာလေးထဲမှာပဲ ပြုလုပ်သွားမှာပါ……….. အပြင်မှာတကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သူကြီးက တာဝန်ယူ ပါမယ်တဲ့…….:D
ကိုဖြင့် သင်္ကြန်ကို မေ့နေတာ အာဟိ..
မဏ္ဍပ်ဆောက်မယ်ဆိုတော့လဲ မုန့် လုံးရေပေါ်လုံးပေးပါ့မယ်တော့.
အပြင်မှာ တစ်ကယ်ဆောက်ရင်တော့ ကောင်းမှာပဲနော့်
မန္တလေးဂေဇက်ဟုတ်ဘူးလားဟင် …. ။
အစ်မခိုင်ခိုင်ရေ …. ဂီနဲ့ ဇက်ကို ပေါင်းထားပေးတာ … တမင်းကြိုတင်ကြံစည်ချင်းလားဗျို့ ..
ဂေဇက်နာမည်နဲ့ မဏ္ဍပ်ဆောက်ပြီး … ပိုက်ဆံရှာ … ပရဟိတ္တအလုပ်တွေလုပ်… ဟိဟိ … စဉ်းစားတာပါ ..
သင်္ကြန်က အရမ်းကို တာဝန်ကြီးတယ် … မူးရူးမယ့် လူတွေကများတယ် …
မန္တလေး ဂီဇက် ဆိုဘဲ
etone ရေ အစ်မလဲ အခုလေးတင် ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီး
ညီမတွေးသလို တွေးနေသေးတယ် ဂေဇက်နာမည်နဲ့
မဏ္ဍပ်ဆောက်ပြီး … ပိုက်ဆံရှာ … ပရဟိတ္တအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ အတွက်ပေါ့
ဒါပင်မယ့် သင်္ကြန်က မူးမယ့် ရူးမယ့် သူတွေများတော့ တာဝန်အရမ်းကြီးလောက်တယ်
ဒါလေးများနော် …….. ရွာထဲက ဘတ်စ်ကား ပေါ်မှာ သိုင်းချတဲ့ ဦးလေးကြီးရယ်၊ ရွာ့အမျိုးတွေထဲက ကုလားကြီးကို ညှစ်ဆုံးမတတ်တဲ့ အပျိုကြီးဟိုအဒေါ်ကြီးရယ်၊ ရွာထဲက သိုင်းတတ်သူတွေရယ် ခေါ်ထားကြမယ်လေ
မူးရူးမယ့် လူတွေကို ထိန်းဖို့ ၊ အင့်ခနဲ၊ အွတ်ခနဲ၊ အိခနဲ နဲ့ကို မြည်အောင်ထိန်းမယ်လေ။
ရွာထုံးစံအရ ရွာထဲမှ ယိမ်းသမ များအား အိုးမဲ ဖြင့် အလှဆင်ခြင်းအားတာဝန်ယူပါ၏..
မုန့် လုံးရေပေါ် အတွက် အားလုံးတာဝန်ယူပါ၏………
ငရုတ်ပင်စိုက်ထားပါတယ်ဗျို့။ ကူညီပြစေ ကူညီပြစေ။
အိတုံနဲ့နွယ်ပင်ရေ အပြင်မှာတော့ မဆောက်ရဲဘူး တာဝန်ကြီးတယ်…..မစဉ်းတောင်မစဉ်းစားနဲ့ တစ်ခုတော့ရှိတယ် စိုင်းစိုင်းမွေးနေ့ရှိတယ် ဒီနှစ်လုပ်မလားတော့မသိဘူး အဲမှာ ရေသန့်ဗူးရောင်းရင်တောင် အရမ်းမြတ်တယ်တဲ့ ……အဲဒါဆို မဆိုးဘူး…..ဂီဇက်က ခေါ်နေကြဖြစ်နေလို့ ဂီဇက်လို့ပဲရေးမိတာ…စောရီး ကိုယ့်အသံထွက်ကိုကမှားနေတာကို….
မလုပ်ပါနဲ့။ ရန်ဖြစ်ရင်ရေသန့်ဗူးနဲ့ပေါက်တတ်ကြလွန်းလို့။ မတော်ရန်ဖြစ်ပြီးရေသန့်ဗူးတွေ နဲ့ပေါက်ကြရင်ရောင်းတဲ့ကိုယ်တွေ အရင် အောင်မယ်ငီး မတွေးရဲတော့ဘူး။
ကဲကဲ မဏ္ဍပ်ကြီးကို တာဝန်ခံမယ့်သူလဲပေါ်လာပီဆိုတော့ Setting အတွက် တာဝန်ယူပါတယ်……….. အဲဒီအတွက်လည်း စီစဉ်ပြီးသွားပါပြီ……….အုန်းလက် (၂)လက်နဲ့ ရေအတွက် တိုင်ကီဝက်………ငှားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်……….. ရေကစားချင်သူတွေအနေနေ့ မဏ္ဍပ်ကြေးက သင့်သလိုပေးနိုင်ပါတယ်………. အစားအသောက်ကတော့ အကုန်လုံးတာဝန်ယူသွားမှာပါ……… မိန်းကလေးများအတွက် မုန့်ဖက်ထုပ်နဲ့ဂျင်းသုပ်ဖြစ်ပြီး………..ယောက်ျားလေးများအတွက်တော့ ပဲလှော်နဲ့ ဘဲကြော်ပါ……….မဏ္ဍပ်မှူးအတွက်တော့ တိုင်းဗုံးနဲ့ လိုင်းဖုန်း ကြိုက်ရာရွေးနိုင်ပါတယ်…… ကျေးဇူးတင်ပါတင်ချင့်………….
ကိုပေါက်၊ တီးဝိုင်း ခေါင်းဆောင် လား ဝိုင်းတီး ခေါင်းဆောင်လားဟင်။ တူ့ အဖွဲ့ထဲ ပါရအောင်လို့
ရံပုံငွေရှာတာ.. တခုခုလုပ်ဖို့ကောင်းတယ် တွေးနေတာ..
သင်္ကြန်နဲ့ရောပြီး.. ကားဆေးပေးရင်း ဖန်ရေ့စ်လုပ်ကြပါလား..။
အလဲ့ ကျောက်ဖျာပူလာတော့ သူကြီးလဲမနေနိုင်ဖြစ်လာပီပေါ့…….. ဒီထက်ကြီးတဲ့ အကြံလေးများရှိရင် စဉ်းစားပေးပါဦးလား…………. သူကြီးရေ ရွှေတိုက်နဲ့ ဖက်ကပ်ကို လူထူးလူဆန်းများဆိုပီး မဏ္ဍပ်ပေါ်တင်ပြရင်ကောင်းမလားလို့………:D
သဂျီးရေ .. လူရော ကားရော ဆေးဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး … တော်ကြာ … အချိုးမပြေတာနဲ့ တွေ့လျှင် တုံမမစိတ်ထက် လက်မြန်တာမို့ … ဟိုရှင်း .. ဒီရှင်း … ရှင်းရချည်ရဲ့ …
စိတ်မြန် လက်မြန် သလိုပဲ
ဆပ်ပြာပါ တိုက်ပေးဆို ခက်မယ် သဂျီးရေ……။ ရွာသားတွေတော့ ဒီအစီအစဉ်ကို သဘောကျကြပါလိမ့်မယ်။ ရွာသူတွေတော့ ကြောက်တယ်တော့…။
သူကြီးရေ ရွာထဲက မဏ္ဍပ်မှာ ရေကစားကြမယ့် အပျိုးတွေရဲ့ အထိန်းတော်လုပ်မယ်ဗျို့ ။
သူများတွေ အလကားနေ ရေပက်နေတဲ့သင်္ကြန်မှာ ရေဆေးခတောင်းရမယ်ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့လှန့်ရ တယ်သူကြီးရေ သူကြီးခိုင်းလို့ လုပ်ကြည့်ပါမယ် ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံတောင်းဖို့ခွက် အဲလေ ကိစ္စကသူကြီးပဲတာဝန်ယူလိုက်နော်…..
ရွာသူ ရွာသား အားလုံး ရိပ်သာဝင်…။သင်္ကြန်မှာ သုံးမဲ့ ငွေတွေဂေဇက် အကောင့်ထဲထည့်ဝင်လှူဒါန်းကြရင် မကောင်းလား..။
အန်ကယ်လေးက အရင်တခါ မမအိတုံတို့ အလှူလုပမတုန်းမကြုံလိုက်ဘူး
ထင်တယ်။ရပါတယ်ဗျာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာမှာ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
(၁၂-၂-၂၀၁၂ နေ့က ) ပထမဆုံး အလှူမှာ အလုပ်တစ်ခုပေါ်လာလို့ ကိုယ်တိုင်တော့မလိုက်ဖြစ်ပါဘူး …. ( ညီလေး ရွှေတိုက်စိုး ထံ) အလှူငွေ ထည့်လိုက်ပါတယ် အလှူရှင် စာရင်းမှာလည်း ပါပါတယ်။ ရွာသူရွာသားတွေ စုပေါင်းလှူတဲ့ အစီအစဉ်တိုင်းမှာ ပါဝင်နေမှာပါ။
မော်မော်သီးရေ … အန်ကယ်လေးက … ရွှေတိုက်စိုးက တဆင့် … အလှူငွေ သုံးသောင်းကျပ်တိတိကို …ကမန်းကတန်း ထည့်ဝင်လှူဒါန်းလာပါတယ် …. ။ အန်ကယ်လေးရေ .. ပါဝင်ကုသိုလ်ယူ ပူးပေါင်းပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ။
ဂီဂီအတွက် မဏ္ဍပ်ဆောက်ပေးမယ်ဟုတ်လား… ဂေဇက်အတွက် မစဉ်းစားပေးတော့ဘူးလားလို့ …
ဘယ့်နှယ့် သများနာမည်က ပါလာရတာတုန်းကွယ်…
မပြန်ရလို့ စိတ်ထိခယက်နေပါတယ် ဆိုမှ …
မေလပထမပါတ်… ဂိုးလ်ဒင်န်း ၀ိခ် ပိတ်ရက်မှ ပြန်ရမယ်ဒဲ့ ….
အူးနိုရေ …. ဂိုးလ်ဒင်းန်း ၀ိခ် အတွက် ဗမာဝေါဟာရ အသစ်….
ထွင်လိုက်ရမား ???? ခွိခွိ …
တသောင်းမပေးရင် လောင်းမပေးဘူး ဆိုတဲ့ ရေကစား မန်းဒပ်တွေပေါ်လာတော့မယ်….
ကျွန်မ မှားရေးမိ ၀န်ဒါမိ ဂေဇက်ပါရှင် နောက်ဆိုအင်္ဂလိပ်စကားကိုမှန်အောင်ဖတ်ပါ့မယ် ဂီအတွက်လည်း မဏ္ဍပ်မဆောက်ပေးပါဘူး….အားလုံးအတွက်ပါ…
ဟေ့.. လောင်းပေးချင်ရင် တသောင်းပေး
လောင်းပေး သောင်းပေး အကောင်းလေး
ကောင်းပြီး ကောင်းတဲ့. ကောင်းဆုခြွေ
မရေးချင်ဘူးသူကြီး ရိပ်သာသွားမှာမို့ ဘာလုပ်လုပ်ပါနိုင်မှာမဟုတ်လို့ ဟီး.. :D:
ကောင်းဆုခြွေတဲ့ သင်္ကြန်ပွဲ သူကြီး kai နဲ့နွှဲ
ရွှေတိုက်ဘေးကဆွဲ…..တွဲလဲ ….. (Khaing Khaing)……..
တွဲလွဲထဲမှာ နွယ်ပင်ပါ အရမ်းကဲနေရှာ(သူရဇော်)
Black Chaw နဲ့ M လုလင် မိတ်ကပ်အသားကုန်ပြင်………
မမဆူးက ၀တုတ်တုတ် ရေစိမ် ကောက်ညှင်းထုပ်…………..
ကိုကြီးကမ်းနဲ့ အံစာတုံး လမ်းဘေး
ကိုသူရ …. အချဉ်မှတ်သလား .. အချို … အချို …..
ပုလင်းပဲ လဲ မလား ၊ လူပဲ လဲမလား သိချင်လျှင် ….. တိုက်ကြည့်ပါဗျို့ …
နွယ်ပင်တို့များ ကဲရတဲ့ကြားထဲ တွဲလွဲပါ ဖြစ်ရဦးမယ်ဆိုတော့
etone နဲ့တူတူပဲ ပုလင်းလေးထဲ နေတာကမှ ဟုတ်ဦးမယ်
OK, Ko Gi,
Please try to meet at Yangon.
I will arrive back in second week of May, 2012.
We can create late Water festival by MG brothers Lay.
( Notes- No Ywa Thu Allow . )
We will invite MDY group to come down to Yangon.
After that all together can go to Mandalay.
ကျုပ်တော့ ဒီသင်္ကြန် မဏ္ဍပ်ထဲ မပါတော့ပါဘူးဗျာ … ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျုပ်က သင်္ကြန်ကျရင် တောထွက်တော့မှာလို့ ကြေညာပြီးသားမို့ပါ …
ဘယ်တော လဲ ဗျို့ ကိုအံဇာတုံး
အဟီး … ရွာပြန်မယ်ကို ပြောတာပါဗျ …
ရှူး … တိုးတိုးနော် …
ကျနော့်ကို လာဆော်မယ့်လူတွေ ကြားသွားဦးမယ် …
ရွာက ခလေးကို ရှင်ပြုပေးဖို့ ထင်ပါ့
ဘယ်ရွာလဲတော့ မမေးတော့ပါဘူး..နာမည်ကြည့်ရတာ တွတ်ပီတို့ ရွာက ထင်ပါ့
တွေ့ရား … တွေ့ရား …
အဲဒါကို ကျုပ်ကပြောတာ …
ဒီမှာ တီယောက်က လာဆော်ပြီ …
စိန်ပေါက် နာက လူဂျိုဟဲ့ ။
နင်ကသာ ကလေးဆယ်ယောက် အမေ … ။ ကဲ … ငါ မပြောလိုက်ဘူး .. ဟင်း ..။
သများတို့ အခြောက်အုပ်စုကရော ဘာလုပ်ရမှာလဲဟင်
တူနယ်တူနယ်ပြောင် မန်းလေးဂဇတ် မဏ္ဍပ်ကွ
တူဂျီးရော ဘော်လီဝယ်ဖို့ ကြိုထုတ်ငွေလေး
ဟိုးးး အရင်က ဇာဇာရတနာဦးစီးတဲ့ မိုးကြိုးငှက်ငယ်လေးများအဖွဲ့ အရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့တယ်။
အဲဒါ အခု သူတို့အဖွဲ့ကို ဆက်ခံမယ့် မျိုးဆက်သစ်တွေ လိုနေတယ်တဲ့…. သတင်းပေးတာပါ။
အပျိုဂျီးတွေကိုတော့ မပက်ရဲပေါင် ၊ အပျိုပိစိ လေးတွေ ဆိုရင်တော့ စိတ်ပါသဗျို့ ၊
ဘယ်နေရာမှာလည်းသိဘူး သဂျန်ဆိုတာ ပုဏ္ဏာတွေဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာ
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု့နဲ့ မကိုက်ဘူး ရေချိုဖြုံးတီးတယ်လို့လုပ်ပြီတော့
ခု သူ့ဆိုဒ်နံမယ်နဲ့ မန်းဒတ်ဆောက်မယ်ဆိုတော့
သင်္ကြန်မှာ အသက်ကြီးသူ တွေကို ရေကန်တော့ ရမယ်။ ခေါင်းလျှော်ပေးရမယ်။
အဝတ်အထည် တွေ၊ မန်းနီး တွေ နဲ့ ကန်တော့ရမယ်။
ဒီတော့ ကန်တော့ခံ အသက်ကြီး သူများကို စာရင်းကောက်မယ်။
ကိုယ့်ဟာကိုယ် အရင် စာရင်းသွင်းသွားပါသည်။
နီးစပ်ရာ တွေ့လိုက်သော ဘဂျော်နီဘု အတွက်လဲ ကိုယ်စား စာရင်းသွင်း ခဲ့ပါ၏။
လက်ခုပ်တီးမယ်ဗျို့၊ ဂေဇက်တို့ပွဲဆို အားပေးပြီးသား
ဟ့ ဟေ့ သင်္ကြန်နှစ်ဦး တူးပို့ တူးပို့ တူးသံပေးသာယာ ဟ ၊
ဟောတစ်ရုံ ဟောတစ်ရုံ ပန်းမျိုးစုံလို့ပင်–
ဖြူဖြူဝါ၀ါ နီနီပြာပြာ ဝေဆာလျှမ်းလို့ပင်–
မောင်ကြီးတို့နွဲပျော်ကြတဲ့ ပွဲတော်အလှရဲ့ တာသင်္ကြန်ပေ–
ဟေ့ ဟေ့ ဟေ့ ဟေ့ ဒို့ကိုကြီးကျော် ဒို့ကိုကြီးကျော်
ဟေ တုပစ္စယော– အာရမ္မနပစ္စယော ၊ အဓိပတိပစ္စယော—အနန္တရပစ္စယော–
ဒုံး ဂွမ်း အုန်း ဆော်ပြီဟ– ပြေး ဟ–
စားလိုက်ရင်လျှာလည်သွားမဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ်၊ ရှုးရဲသံ ညံစီသွားတဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ်–
၀ုန်း အုန်း ဗွမ်း ဟဲ့ ဘလာစီရာကြိုးပြတ်အောင်ထိုးရလား သောက်ကောင်ရဲ့ —
ကိုင်း ပရိတ်ရေအိုးများ လာယူလို့ရပါပြီဗျို့ —ဒုံး ဂွမ်း၊ ချမ်းချမ်းချမ်းချမ်း၊ ဘုံးဘုံးဘုံးဘုံး ၊မကောင်ဆိုးဝါး
နှစ်သစ်ကြီးမှာအနှောက်ယှက်ကင်းပြီး ရွာသားဒွေ ကျန်းမာကြပါစေ ဟေဟေဟေ ချမ်းသာကြပါစေ။
ကျနော် တို့ရွှာ မှာငရုန်ခင်းပေါတယ်ခင်ဗျ
သင်္ကြန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရင်ထဲမှာနွေးသလိုခံစားရသလို။ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ပါလာတယ်။ တရားအလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်စရာလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးစိတ်တူကိုယ်တူ ရွာသားတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် rose တို့က ပါပြီးသားပဲ။ တူရ နဲ့ခိုင်ခိုင် ရဲ့ကဗျာ က ရွာမဒက် ကို အသက်ဝင်သွားစေတယ်